विवश वस्ती शुक्रवार, भाद्र १६, २०७४
‘घुम्यो, राम्ररी घुम्यो । एक पटक पनि नरोकिई दश मिनटजति मज्जाले घुम्यो । यसरी नै घुम्ने हो भने त हामी अरूभन्दा धेरै अगाडि रहन्छौं । पहिल्यै यसरी नै, मज्जाले घुम्ने स्पिनर पाएको भए पो । कामै नलाग्ने, एक पटक सर्रर घुमेपछि टक्कै रोकिने स्निपरले बितायो ।’ चोकमा एकजना स्पिनरवाला अचेल खुबै चल्तीमा रहेको फिडगेट स्पिनर घुमाउन व्यस्त थिए । उनी मच्चीमच्ची घुमाउँदै थिए, स्पिनर । र, लिँदै थिए, मनोरञ्जन पनि । ती स्पिनरवालाभन्दा केही बित्ता मात्रै पर अर्कै स्पिनरवाला पनि भएभरका बल लगाएर घुमाउन व्यग्र थिए । र, घुमिरहेको स्पिनरतिर एकोहोरो नजर लगाउँदै भन्दै थिए, ‘अचम्मैले घुम्यो आज त । पहिला–पहिला त यति धेरै समयसम्म यो स्पिनर घुमेकै थिएन । के भयो, यस्तो ?’
दुई फरक स्पिनरवालाहरू चोकमा पलेँटी मारेर स्पिनर घुमाउन व्यस्त छन् । तर, घुमाउनेभन्दा हेर्नेहरूको भीड बाक्लो थियो । कसले धेरै समयसम्म घुमाउन सक्छ ? हेर्नेहरूले आ–आफ्नै तरिकाले मूल्यांकन गरिरहेका थिए । त्यहीबेला, अरू पनि थपिए, हातमा स्पिनर बोकेर । साँच्चै, आजको दिन चोकमा स्पिनर प्रतियोगिता नै हुन लागेकोजस्तो आभास हुँदैथ्यो । ‘यो घुमाउन पनि कला नै चाहिन्छ । सामान्य कलाले भने घुम्दैन । विशेष कला नै चाहिन्छ । कला नजान्नेहरूले स्पिनर घुमाउने रहर गर्नु बेकार छ ।’ घुमिरहेको स्पिनरलाई रोक्दै एक जनाले भने । अर्कोले थपे, ‘कला त चाहिन्छ नै । तरिका पनि जान्नुपर्छ, यसलाई घुमाउन । तरिका जानिएन भने जतिसुकै कला प्रदर्शन गरे पनि फुस्सा सावित हुन्छ । मैले कला र तरिका दुवै अपनाएर घुमाउने गरेको छु र सफल भएको छु ।’
फेरि उनीहरू घुमाउन थाले । एक स्पिनरवालाले प्रफुल्ल हुँदै भने, ‘हिजोअस्ति हामीले जुन सफलता पायौं । यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र संयमित ढंगले घुमाउन जानेकै कारण त्यस्तो सफलता पाएका हौं । जथाभावी, हावादारी रूपले, अनुमानका भरमा यसलाई घुमाउनु हुँदैन । जानेर, बुझेर मात्र घुमाउनुपर्छ, तब मात्र लामो समयसम्म घुमिरहन्छ यो ।’‘हैन, कसै–कसैका त हात पनि त्यस्तै हुन्छ कि क्या हो ? कसैले त निरन्तर घुमाउन जान्दछन् । तर, कसैले भने घुमाउन भाँती नै पु¥याउँदैनन् ।’ अर्कोले थपे । स्पिनर घुमाउने र हेर्नेहरू आ–आफ्नै धुन र चालढालमा व्यस्त देखिएका छन् । एक स्पिनरवालाले भने स्पिनर घुमाउँदा–घुमाउँदै एउटा नयाँ कुरा निकाले र भने, ‘यो स्पिनर घुम्ने–नघुम्ने, लामो समयसम्म घुम्ने र छोटो समयसम्म घुम्ने भन्ने कुरा हावामा पनि भर पर्ने हुँदो रहेछ । बिनाहावा कसरी घुम्छ यो ?’ केही बेर मौन रहेपछि ती स्पिनरवालाले अर्का स्पिनरवालाको हातमा घुमिरहेको स्पिनरतिर हेर्दै भने, ‘तिम्रो स्पिनर पहिला–पहिला त्यति मज्जाले घुम्दैनथ्यो, तर अहिले जोडजोडले घुम्न थालेको छ ।
त्यसरी बेजोडले घुम्नुको कारण हावा नै हो । जुन दिन तिम्ले दक्षिणतिरबाट चलेको हावामा फर्काएर घुमाउन थाल्यौ, त्यही दिनदेखि तिम्रो स्पिनर बेजोडले घुमिरहेको छ । कि कसो ?’ अर्का स्पिनरवाला पनि के कम । उनले पनि सीधै जवाफ दिए, ‘तिम्रो स्पिनर पनि अचेल धेरै नै घुम्न थालेको छ । उत्तरतिरबाट चलेको हावाको सहयोग नलिएका भए तिम्रो स्पिनर त्यति बेतोडले घुम्थ्यो ? कति गजबको कुरा गर्छौं, भन्या । मेरो स्पिनरलाई मात्र कत्तिको दक्षिणको हावाको प्रभावले घुमेको देख्छौ ? आफूले उत्तरको हावाको साथ लिएर घुमाइरहेको चाहिँ देख्दैनौ । आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने, अरूको कपालको जुम्रा देख्ने ।’ दुवै स्पिनरवालाहरूबीच तीव्र बहस छेडिन थाल्यो । बहस तन्किँदै गयो । बहसका क्रममा दक्षिण र उत्तरी हावाले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविकै थियो ।